99designs: Crodsourcing your Logo and Web Design
Naqshadaynta Dadweynaha ee leh 99designs
Arbacada, Nofeembar 25, 2009 Monday, July 8, 2013 Douglas Karr
Waxaan dhawaan ka qoray khibradeyda mashquulinta naqshadeyntaada. Khibraddu waxay ahayd mid wanaagsan oo waan ka hadlay No Spec dhaqdhaqaaqa iyo ka soo horjeedka boggaga la midka ah. Iyada oo loo marayo boosteejo kafaala qaaday, toddobaadkan waxaan isku dayay 99designs.
Khibraddii ku saabsanayd 99designs waxay ahayd mid aad isugu eg, waana necbahay inaan dhaho, weli labaduba waa fudud yihiin iyo raaxo leh. Waxaan go'aansaday inaan bixiyo a asalka cusub ee Twitter in si fiican loo dalacsiiyay shirkadayda, balooggayga iyo adeegyadayda. Waxaan bixiyay $ 100 + qiyaastii $ 50 khidmadaha… uguyaraan iyo kayar qadarka 99designs lagu taliyay.
Halkan waxaa ahaa soo galitaankii aan u xushay inuu yahay kan ku guuleystey asalkeyga cusub ee Twitter:
Qoraagu wuxuu adeegsaday asalka oo laga helikaro bogga muraayadaha bilaashka ah kadibna wuxuu si toos ah ugu meeleeyay faahfaahinta aan weydiistay. Jihooyinkeyga, waxaan awooday inaan dhaliyo oo aan jawaab celin toos ah ka bixiyo naqshadeyn kasta iyo naqshadeeye kasta. Qaar ka mid ah nashqadeeyayaashu runtii wey isku soo dhowaanayeen… Waxaan runtii dareemay xoogaa xumaan ah inaanan iibsanin nashqado badan!
Nidaamka loogu talagalay '99designs' wuxuu runtii soo bandhigayaa daciifnimo xagga warshadaha naqshadeynta garaafka soo jireenka ah. Iyada oo 99designs, waxaan awooday inaan helo noocyo kala duwan oo tayo sarre leh oo tayo sare leh iyo waliba qaar xoogaa yara ahaa sanduuqa. Tani waxay ahayd my artist's first project on 99designs wayna guuleysteen! Farshaxanistaha ayaa qaatay macluumaadkeyga wuxuuna abuuray asal aan ka duwanayn naqshadaha kale. Waa mid cusub oo nadiif ah - laakiin wali waa teknolojiyad sare.
Waxaa jira 51,000 nashqadeeyayaal ka tirsan bulshada 99designs oo naqshad cusub u soo rogaya barta 10kii ilbiriqsiba. 99designs waxay furan yihiin 24 saacadood maalintii, 7 maalmood usbuucii iyo maalin kasta oo sanadka ah. Kaliya maahan adeeg loogu talagalay dadka waawayn ee aan awoodin ilaha naqshadeynta, sidoo kale. 99designs ayaa naqshado u sameeyay Wadaadka Rick Warren (Qoraaga Ujeeddada Darawalnimada Nolol) ee loogu talagalay daboolka buuggiisa soo socda,
ka Mashruuca SxSW Rasmiga T. Shirt iyo xataa Naqshadaynta naqshadda duubista 'Network Dish'.
Way igu adkaan doontaa inaan ka fogaado adeegyadan. Waxaan si qurux badan u jeclahay naqshadeeyayaasha waxaanan ahay saaxiibo fiican (wali waxaan rajeynayaa…) inbadan Marwalba waan xiiseynayaa oo waan layaabayaa waxa ay awoodaan inay qabtaan. Waa iska fududahay in adeegyadan ay i siinayaan xulashooyin fara badan oo aanan ka gudbi karin shirkadaha naqshadaha soo jireenka ah iyo isdhexgalka.
Hal shay oo aan jeclaan lahaa 99designs sameeyey ayaa loo oggolaaday fannaaniintooda inay naftooda iyo shirkadooda u horumariyaan 99designs. Waxaan garwaaqsaday inaan fursad uheli lahaa inaan dhaafo khidmadaha 99designs haddii aan toos ugu aadi lahaa farshaxanka - laakiin taasi waa aan wax ku ool ahayn iyadoo la siiyay faa'iidooyinka nidaamka. Weli waxaan isticmaali lahaa 99designs markaan rabo inaan wax ku tuuro halkaas oo aan dib ugu soo celiyo fikradaha hal abuurka ah… laakiin dhiirrigelinta farshaxanka iyo goobahooda ayaa ii oggolaanaya inaan abuuro xiriir socda marka taasi ay tahay ikhtiyaarka ugu fiican.
Tags: astaan ​​astaanwareejinta faylka weynPythonRuby
Farxad #dhaafis iyo #xikmad la’aan
Quark Promote waxay bixisaa xalka isku dhafan ee baahiyaha daabacaadda ganacsigaaga
Nov 25, 2009 saacadu markay tahay 4:31 PM
Waad ku mahadsantahay wadaagida khibradaada Douglas!
20, 2009 at 2: 16 PM
Waxaan sidoo kale u isticmaalay asalkan asalkayga Tumblr bogga sidoo kale. Runtii waan jeclahay fududaynta iyo quruxda qaabeynta!